Nootropics PRL-8-53: Hatsarao ny fitadidy sy ny fahafaha-mianatra?
Ny hafetsen'ny PRL-8-53 toy ny zava-mahadomelina psychoactive dia miverina tany am-piandohan'ny taona 1970. Nikolaus Hansl, mpampianatra ao amin'ny Oniversite Creighton, dia sendra nahita ilay nootropic raha niasa tamina esters asidra amino benzoika metaet.
Hatramin'ny nanombohany, ity famenon-tsakafo ity dia nandalo fandalinana preclinical tokana sy fitsapana olombelona. Ny fikarohana klinika no porofo farany milaza fa ny PRL-8-53 amin'ny fianarana dia manatsara ny fahatsiarovan-tena fohy sy ny fahaiza-miteny.
PRL-8-53 dia tsy nahazo ny fanohanan'ny FDA, fa io dia famenon-tsakafo tsy voalamina any Etazonia. Azonao atao ny mividy PRL-8-53 mividy maimaim-poana ho zava-mahadomelina lafo loatra.
Inona ny PRL-8-53?
PRL-8-53 dia avy amin'ny asidra benzoika sy benzylamine. Ara-tsiansa dia fantatra amin'ny hoe 3- (2- (benzyl (methyl) amino) etil) benzoate.
Hatramin'ny faramparan'ny taona 1970, PRL-8-53 dia ny hatezerana rehetra no zava-mahadomelina noho ny fampitomboana ny fiasan'ny ati-doha. Farafaharatsiny, misy fitsapana mahomby ataon'ny olombelona izay manohana ny fahombiazany. Ankoatr'izay, ny famerenana PRL-8-53 ao amin'ny Reddit dia manohana ny fahombiazan'ity fanampiana ity amin'ny fanatsarana ny fitadidiana sy ny fianarana.
Hitan'ny Profesora Hansl tamin'ny voalohany PRL-8-53 nootropic manatsara ny fahatsiarovana fotoana fohy sy ny fitadidiana am-bava. Na izany aza, ny zava-mahadomelina dia miatrika ny fahaketrahana, ny adin-tsaina, ny tebiteby ary ny havizanana koa.
Hetsika mekanisma PRL-8-53
Noho ny tsy fahampian'ny fikarohana natao momba ny PRL-8-53, mistery tsy hita ny fomba fiasa marina momba azy. Na izany aza, mihevitra ny mpahay siansa fa ny fanafody dia manatsara ny fiasan'ny ati-doha amin'ny fomba telo.
PRL-8-53 nootropic mampihetsika ny tsiambaratelon'ny acetylcholine, izay lohan'ny neurotransmitter, tompon'andraikitra amin'ny asa fahatsiarovana sy fianarana.
Ity zava-mahadomelina psychoactive ity dia miasa ihany koa amin'ny rafitra dopaminergika amin'ny alàlan'ny fanodinana ny haavon'ny dopamine salama. Inona koa, maka Fahaketrahana PRL-8-53 ny zava-mahadomelina dia hanakana ny famokarana serotonine be loatra. Ity vokany ity dia mampihena ny haavon'ny fihenjanana mba hifehezana ny tebiteby, ny fiovan'ny toetr'andro ary ny tsy fahitan-tory.
Tombontsoa azo avy amin'ny PRL-8-53
Mampitombo ny fahaizana mianatra
Ny vovony PRL-8-53 dia manaporofo ny fanatsarana ny fahalalana sy ny fahaizany mianatra. Ny famenony dia miteraka fahatsiarovana ny fampahalalana, ny teny ary ny hevitra samihafa. Noho izany dia lasa zava-mahadomelina fandinihana hyped eo amin'ireo mpianatra te-hiondrana amin'ny fitsapana mafy.
PRL-8-53 amin'ny fianarana dia mety hanatsara ny fifantohana ihany koa, indrindra rehefa manandrana mahatakatra hevitra vaovao. Ny mpitsabo aretin-tsaina sasany dia milaza fa ny fihinanana an'ity zava-mahadomelina mahira-tsaina ity dia mitazona anao hatrany amin'ny làlan-kaleha ary tsy dia hitolona ianao raha manazava fitaovana vaovao. Ireo tombony PRL-8-53 ireo dia mety ho maraina vao maraina ho an'ireo olona be saina izay miatrika fanadinana fizika fizika sarotra na fitsapana am-bava tsy vita.
Fanatsarana ny fahatsiarovana
Ny iray amin'ireo vokatra PRL-8-53 manan-danja dia misy ny fitomboan'ny fahatsiarovana. Ny nootropic dia mampihetsika ny acetylcholine sy ny rafitra dopaminergic, izay tena ilaina amin'ny fahalalana.
Nandritra ny fitsapana ara-pahasalamana nahitana taranja fahasalamana 47, nanamarika ny profesora Hansl fa ireo izay naka PRL-8-53 dia nanao fampisehoana tsaratsara kokoa noho ny mpandray anjara tamin'ny placebo. Ankoatr'izay, ity fahatsiarovana ity dia mety haharitra efa ho herinandro.
Talohan'ny nanandramany andrana tamin'ny zanak'olombelona dia nahatsikaritra i Hansl fa ny PRL-8-53 dia mahasoa ny fahatsiarovan'ny voalavo. Ny famenony dia mahatonga maodely murine hahatsiarovan-tena sy hampifandray ny valin'ny toe-javatra mampiady saina.
Manatsara ny antony manosika sy mampihena ny havizanana
Ny zava-mahadomelina depression PRL-8-53 dia mampiseho fananana dopaminergika. Ny fitambarana dia mampitombo ny asan'ny dopamine, simika ao amin'ny ati-doha izay misy fiatraikany amin'ny antony manosika, ny fiakaran'ny toetrany ary ny fihenan'ny havizanana. Noho izany, mampiroborobo ny fahasalamana ara-tsaina, miaraka amin'ny mety hanohitra ny aretin-tsaina toy ny ADHD sy schizophrenia.
Na eo aza ny vokatra PRL-8-53 tsara dia tsy tokony hampiasa ny nootropic ho zana-kazo ho an'ny fanafody fitsaboana ianao. Ity fitambarana ity dia tsy natao ho an'ny fikolokoloana aretina na fitsaboana aretina.
Ahoana ny fakana PRL-8-53?
Ny mahazatra Doka PRL-8-53 dia manodidina ny 5mg isan'andro, raisina ho fanampiana am-bava. Na dia misy fikarohana voafetra aza hametrahana ny doka azo antoka indrindra, ny fitsapana voalohany nataon'ny olombelona dia nampiasa 5mg. Ny flick amin'ny alàlan'ny fanadihadihana PRL-8-53 dia manamafy fa ny mpampiasa mazoto sasany dia mandray hatramin'ny 10mg ka hatramin'ny 20mg amin'ny famenony.
Raha mitantana ny famenon-tsakafo ho an'ny famoronana fitadidiana fotoana fohy ianao, toy ny rehefa manao fitsapana dia ataovy izay hampiasainao adiny roa alohan'ny tena fampiharana.
PRL-8-53 nootropic dia misy amin'ny vovoka, pilina ary endrika misy ranoka. Azonao atao ny misafidy ny hitelina ilay takelaka na manampy azy amin'ny fisotroanao; izay mety aminao. Na dia azonao atao aza ny misafidy fitantanana sublingual, ity fomba ity dia mety manjavozavo amin'ny lelanao. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia aleony mandray am-bava PRL-8-53.
Amin'izao fotoana izao, tsy misy tolo-kevitra mety amin'ny PRL-8-53. Tsy fantatra ny fifandraisan'ity tsikombakomba ity amin'ny fanafody psychoactive hafa. Ankoatr'izay, PRL-8-53 dia manana tanjaka avo lenta, ary noho izany, tsy ilaina ny manambatra azy amin'ny nootropics mampitombo fahatsiarovana hafa.
Tsy manome sosokevitra na tsy manome sosokevitra izahay Ampahany PRL-8-53. Farafaharatsiny, tsara kokoa raha tsy sahinao amin'ny zava-mahadomelina marani-tsaina misy vokany mitovy amin'izany. Na eo aza izany fampitandremana hentitra izany, ny mpampiasa sasany ao anatin'ny vondrom-piarahamonina psychonautika dia miaiky fa ny fametahana vovoka PRL-8-53 miaraka amin'ny Alpha-GPC, piracetam, IDRA-21, ary theanine dia manome azy ireo tombontsoa ara-pahasalamana faran'izay betsaka.
Misy fiatraikany amin'ny PRL-8-53?
Hatreto dia mbola tsy misy ny voka-dratsy ateraky ny PRL-8-53. Ny loharanom-pahalalana tokana misy dia miverina amin'ny taona 1970 nandritra ny fitsapana ara-pahasalamana sy mialoha ny nootropic. Ao amin'ny fandalinan'olombelona, ​​ireo mpandray anjara dia tsy naneho fambara ratsy tamin'ny fatra 5mg isan'andro.
Na dia tsy misy ny voka-dratsin'ny PRL-8-53 amin'ny klinika, alao antoka fa mitazona fatra ambany ianao. Araka ny fandinihan'ny voalavo, ny habetsaky ny fanampin-tsakafo dia manimba ny hetsika.
Betsaka ny traikefan'ny mpampiasa ao amin'ny magazay Reddit sy Amazon momba ny vokatry ny Ahiahy PRL-8-53 nootropic.
Topazo maso ny sasany amin'ny famerenana PRL-8-53;
Fianarana sy fitadidiana fanatsarana
“Mampiasa PRL-8-53 be dia be aho isaky ny misy lahateny hotadidiko. Misy fiovana lehibe eo amin'ny fahafahako mitadidy zavatra haingana. ”
“Tsikaritro fa nitombo ny fahaizako miteny tamin'ny PRL. Miaraka amin'ny kafeinina, fitaovana fandinihana tsara io. ”
Hoy i Baliflipper;
“Nanomboka tamin'ny doka kely aho ary niasa hatramin'ny habetsaky ny habetsany. Tsapako tokoa fa ny 10mg dia fatra andavanandro lehibe… Na izany aza, nanapa-kevitra ny hanandrana 20mg aho ny zoma ho an'ny fitsapana Neurosains ary talanjona tamin'ny fanatsarana ny fahatsiarovana… Tsapako fa ny fatra lehibe kokoa dia nanampy tamin'ny fampahatsiahivana ary nanampy be tamin'ny fitsapana. . "
Hoy i Lifehole;
“Raisiko amin'ny maraina rehefa mifoha aho (11 maraina) miaraka amin'i Noopept, L-theanine, bupropion, vortioxetine, ary tianeptine… Tsy azo atao mihitsy ny manavaka izay manao inona amin'ireo zava-mahadomelina be loatra amin'ny resaka comedowns…”
“Manao IDRA-21 sy PRL-8-53 isan'andro aho izao. Tiako ilay combo, ary manamora kokoa ny fitadidiana sy ny fahazoana ireo hevitra vaovao. ”
“Tahaka ny ankamaroan'ny zana-tsoratra, dia mahatsiravina tokoa. Na izany aza, tsy dia ratsy toa an'i Noopept izy io… hahatonga ny lelanao ho matimaty ihany koa izy amin'ny fotoana voalohany… Azo antoka fa mihoatra ny tsiro ny tombony. ”
Vokatry ny lafiny PRL-8-53
Hoy i Omniavocado;
“Nahatadidy fahatsiarovana somary ratsy kokoa aho rehefa avy nihena ny vokany na dia kely aza ny fatra. Taorian'ny fatra farany, nanana fahatsapana tsy azo faritana sy tsy mahazo aina kely aho. ”
Nilaza ny mpampiasa tsy fantatra anarana;
"Tamin'ny dosie mihoatra ny 30mg am-bava sy 15mg isaky ny zatra, narary andoha aho ary nisy vokany hafahafa tamin'ny fahitako."
Ny vovony PRL-8-53 dia nootropic mampanantena izay mbola tsy voadinika amin'ny sehatry ny siansa. Ny hany porofo mivaingana momba ny fahombiazany dia efa hatramin'ny dimy taona. Na izany aza, ny neurohackers be zotom-po dia mamatsy azy ho toy ny fampitomboana fahatsiarovana mahery vaika miaraka amin'ny voka-dratsy PRL-8-53 kely indrindra.
Ny fanampiana dia mety amin'ny fitadidiana fotoana fohy. Ny fampahalalana nangonina avy amin'ny mpampiasa efa za-draharaha sy ny fikarohana fikarohana misy dia manamarina izany Ahiahy PRL-8-53 ny fanafody dia hanatsara ny fahatsiarovana hatramin'ny 200%.
Ny fifandraisan'ity nootropic ity amin'ny zava-mahadomelina hafa dia mbola mistery. Noho izany, ny fiarovana sy ny fandeferany dia tsy fantatra. Noho izany, tsy safidy ihany koa ny fanandramana ny stack PRL-8-53. Miresaha amin'ny dokotera alohan'ny handraisanao PRL-8-53 miaraka amin'ireo fanafody prescription hafa.
Azonao atao ny mividy PRL-8-53 mividy vovoka na endrika pilina toy ny Nootropic supplement.
Hansl, NR, & Mead, BT (1978). PRL-8-53: Fampivoarana ny fianarana ary ny fihazonana manaraka ny olombelona vokatry ny fatra ambany am-bava an'ny mpitsabo psychotropika vaovao. Psychopharmacology (Berl).
Hansl, NR (1974). Mpiasa mavitrika spasmolytic sy CNS: 3- (2-benzylmethylamino etil) asidra benzoika methyl ester hydrochloride.
McGaugh, JL, & Petrinovich, LF (1965). Ny vokatry ny zava-mahadomelina amin'ny fianarana sy ny fitadidy. Famerenana iraisam-pirenena momba ny Neurobiology.
Kornetsky, C., Williams, JE, & Bird, M. (1990). Vokatry ny saina sy manentana ny zava-mahadomelina psychoactive. Monografia fikarohana NIDA.
Giurgea, C. (1972). Farmakolojika amin'ny hetsika fampidirana ao amin'ny ati-doha. Fanandramana amin'ny hevitra nootropic amin'ny psychopharmacology. Pharmacol tena izy (Paris).
Hindmarch, I. (1980). Ny fiasan'ny psychomotor sy ny fanafody psychoactive. British Journal of Clinical Farmacology.
1. Topi-topan'ny PRL-8-53
2.Inona ny PRL-8-53?
4. Tombontsoa azo avy amin'ny PRL-8-53
5.Ahoana ny fakana PRL-8-53?
7.Misy ve ny voka-dratsin'ny PRL-8-53?
8.Miaina traikefa ho an'ny mpampiasa